Ciidamada NISA Oo Gacanta ku Dhigay Xubin ka Tirsan Amniyaadka Al-Shabaab, – Heemaal News Network
Sida lagu baahiyay barta Twitter-ka ee Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa lagu sheegay in xubinta ka tirsanaa Al-Shabaab lagu qabtay degmada Huriwaa.
Howlgalka ayaa dhacay xalay, xilli taariikhda ku beegneyd 13 September, waxaa la sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay.
Waxaa lagu wargeliyay shacabka inay la soo xiriiraan ciidamada Amniga, haddii ay helaan xogo ku saabsan Al-Shabaab.
Bishan gudaheed ayaa howlgalada gaarka ee ay sameeyaan Ciidamada NISA waxaa xilli habeen ah lagu soo qabtay dhowr xubnood oo la sheegay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab.
Maalmihii u dambeeyay Taliska NISA ayaa howlgalada uu ku soo qabtay xubnaha Shabaab ku shaacinayay Barta Twitter-ka oo dhowaanahan dib boorka looga jafay.
Madaxweyne Farmaajo Oo Shir Deg-deg ah Ugu Yeeray Madaxda Galmudug Ee Khilaafka Ragaadiyay.
Madaxweynaha Soomaaliya,Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isugu yeeray madaxda dowlad-goboleedka Galmudug si loo soo afjaro xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee kasoo cusboonaaday deegaannadaas. “Madaxweynuhu waxa uu si dhaw ula socdaa khilaafaadka siyaasadeed ee haatan ka dhex […]